अघोर बाबाले यस्तो धम्की दिएपछि जंगी बाबाले उठाए डरलाग्दो कदम, मुद्धा लगाउने तयारी (भिडियो सहित) – दैनिक नेपाल न्युज
अघोर बाबाले यस्तो धम्की दिएपछि जंगी बाबाले उठाए डरलाग्दो कदम, मुद्धा लगाउने तयारी (भिडियो सहित)
मोरङ । अहिले भाइरल अघोर बाबा र जंगी बाबा बीच दुस्मनी बढेको छ । बाबा बाबा बीच किन यस्तो दुस्मनी बढ्यो ? पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक संजालमा भाइरल बनेका चर्चित अघोरी बाबाले बिहे गरेपछी एकाएक फेरि सामाजिक संजाल तातिएको छ । बाबाको बिहेलाइ लिएर विभिन्न टिप्पणी हुँदै आएको छ कतिले राम्रो भयो राम्रो गरे भन्दैछन भने कतिले यो गलत गरे भन्दैछन । जङ्गी बाबा पुर्बमा धेरैनै नाम कमाएका बाबा हुन । युटुबमार्फत चर्चामा आएका अघोरी बाबाले धेरै नै अन्तरबार्ता दिए । अरुभन्दा छुट्टै किसिमले बोल्ने शैलीले उनिले निकै नै चर्चा कमाए ।
हरेक कुरालाई फरक किसिमले बताउने बाबाले जीवन दर्शन भुतप्रेत सङ सङै बसेको आत्मा अनि चुडेल सङ माया पिरती गासेको जस्ता फरक कुराले उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याएको थियो । केटि भनेको पतुर्नी हुन्छन यिनिहरुको नजिक जानू हुदैन लाइफ ड्यामेज हुन्छ भनेर बिभिन्न अन्तरबार्तामा दिए। अघोर बाबाको कुराहरुलाई जंगी नाम गररेका बाबाले बिरोध गरेपछि मलाइ मार्छु भन्दै धम्कि दिए भन्दै जंगी बाबा आक्रोशित भएका छन् । के हुदै छ बाबा बीचमा यस्तो ? तल भिडियो पुरा हेर्नुहोला ।
कलाकार सरिता लामिछानेको भाई नआउदा रुदै गाईन तिहार गीत
अध्यक्ष दाहालसँग दूरी बढेको छैनः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ, २५ असोजः नवरात्रको पाँचौँ दिन दसैँघर वा पूजाकोठामा नौ दुर्गामध्येकी पाँचौँ स्कन्दमाताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ ।प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पञ्चमीअर्थात् दुर्गा पक्षको पाँचौँ दिन स्कन्दमाताको विधिपूर्वक पूजा [...]
माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरुन, हेर्नुहोस असोज २५ गतेको राशिफल
मेष Aries:- आम्दानी सामान्य मात्र हुनेछ । खर्च भए पनि काममा विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन । मेहनत गर्दा अवसर भने पाइनेछ । वृष Taurus:- नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने योग रहेको छ [...]
माता पाथिभराले हामी सबैको कल्याण गरुन, हेर्नुहोस असोज २४ गतेको राशिफल
मेष Aries:- काममा केही चुनौती देखिए पनि मेहनत गर्दा समयको सदुपयोग हुनेछ । सहयोगीहरूले सहयोगका लागि तत्परता देखाउनेछन । मन खुसि रहनेछ । वृष Taurus:- नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ [...]
दसैँलाई कोसेली भाँगो र डल्ले खुर्सानी
बलेवा, २३ असोजः रोजगारिका लागि आएका दोलखाका कवि न्यौपाने दसैँ मान्न यो वर्ष काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ । सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहनुभएका न्यौपानेले दसैँ मान्न घर [...]
१२ बजे राती भाइरल झाँक्रीको आत्मा बोल्यो, चल्यो रुवाबासी, कृष्ण घतानीलाई बान हानेको रहेछ, काल झाँक्रीको जिउमा बनझक्रीको आत्मा चढेपछि यस्तोसम्म भयो (भिडियो सहित)
अविरल वर्षाले धानबालीमा ठूलो क्षति, किसान निरास
विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश महर्जनको निधन
नेपालमा अझै केही दिन वर्षा हुने, कयौँ ठाउँमा धान डुबान
चितवनमा नेपाली कांग्रेसको चियापान समारोह